24 | October | 2014 | Danya Wadi
မြေပုံမြို့နယ်တွင်ပြုလုပ်ပေးသောနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်၊ပြုခွင့်နဲ့ အနာဂတ် အတွက် ရွေး ချယ် စရာ များ
By danyawadi October 24, 2014 Leaveacomment
စနေလင်း| October 24, 2014 မြေပုံမြို့၊ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ နိုင်ငံသား ပြုခွင့် (အစိမ်းရောင်ကတ်) ရရှိခဲ့သော ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသား တဦး (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ) မြေပုံမြို့၊ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် (ပန်းနုရောင်ကတ်) ရရှိခဲ့သော ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီး တဦး (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ) မြေပုံမြို့၊ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ် (White Card) ရရှိခဲ့သော ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီး တဦး (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ) မြေပုံမြို့နယ်ထဲက ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်း။ ဒီစခန်းထဲမှာ အရင်တုန်းကတော့ ဒုက္ခသည် […]
22nd October,2014 M-Media Repored by Chan Nyein Aye On 17th October 2014, issue No. 44, Aung Jeyatu Journal has published an article insulting Islam and Prophet Muhammad (PBUH) with fabricated information and groundless accusation, issued across Burma that directly jeopardising peace and stability in the country. It is also breaching the rule of law. Therefore, Islamic […]
European countries ‘challenge Myanmar on Rohingya issue’
by admin — Burma Times: 23 Oct 2014 Some European countries have challenged the Myanmar authorities to prove the claim that Rohingya do not exist in Myanmar by providing strong evidence, according to Rakhine State Chief Minister U Maung Maung Ohn. The minister raised the issue during an October 22 press conference held at the […]
သဲကန္တာရအလယ်ခေါင်က ရေကန်နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း
သဲကန္တာရ အလယ်မှာ ထူးခြားစွာပဲ စိမ်းလဲ့လဲ့ မြက်ခင်းပြင်၊ စိမ်းလဲ့လဲ့ ရေကန်နဲ့ သာယာ လှပနေတဲ့ တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ယခုလို မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ တည်နေရာ ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ဂန်ဆူးပြည်နယ်၊ Dunhuang မြို့ အနီးမှာ ရှိပါတယ်။ သဲကန္တာရ တောင်တန်းများ ဝိုင်းရံထားပြီး အလယ်မှာ ယခုလို သာယာလှပတဲ့ နေရာ တစ်ခု ရှိနေတာ အထူး အဆန်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ်အားဖြင့် ၁.၃၇ ဧက ရှိပြီး ပျမ်းမျှအနက်က ၁.၃ မီတာ ရှိပါတယ်။ ၁၉၆၀ ကျော်တုန်းက ၇ မီတာ ကျောအထိ နက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ရေနည်းလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလှည့် […]